फागुन ७ गते मध्यरातिबाट ‘प्रचण्ड युग’ को अन्त्य — OnlineDabali
काठमाडौँ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच औपचारिक रुपमा पार्टी एकता भएको छ । दशैंले जुराएको केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको प्रेमले अन्ततः दुबै नेता एउटै पार्टी बनाउन तयार भएका हुन् ।
चुनावमा नै सूर्यमा बोकेर भोट माग्न प्रचण्ड तयार भएका थिए तर कार्यकर्ताको चर्को विरोधका कारण पछि हटेका थिए । चुनावपछि एमालेभित्र एकताको विषयमा फरक फरक मत आएपछि केही समय धर्मराएको थियो ।
चुनावीदेखि सरकार समिकरणसम्म पार्टी एकतालाई मुख्य विषय बनाएका प्रचण्ड एमाले नेताहरुका पछिल्ला अभिव्यक्तिबाट सशंकित भएका थिए । त्यसपछि उनले फेरि घुर्की लगाउँदै जता पनि फड्को हान्न सक्ने बताउँदै आएका थिए ।
प्रचण्ड २०५२ सालको असारमा जनयुद्धको पहिलो दस्तावेज लखेका थिए । उक्त दस्तावेजले ‘नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौं’ जनयुद्धलाई मुख्य मार्ग बनाएको थियो । उक्त दस्तावेजकै कारण नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपनि मूल उद्देश्य भने पूरा भएन । संसदीय व्यवस्थालाई ‘खशीको टाउका झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बिक्री गर्ने थलो’ भन्दै सुरु गरेको मूल नेतृत्व फेरि त्यही व्यवस्थामा फर्किएको छ ।
२०५२ को फागुन १ गतेबाट सुरु भएको जनयुद्धले ठूलो उथलपुथल ल्याउनुको साथै त्यसको नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड अलग पहिचानसँगै नेपाली राजनीतिमा उदाय । तत्कालिन नेकपा (माओवादी) पार्टी मात्रै नभएर राजनीतिक आन्दोलनको बन्यो । राजनीतिक विश्लेषकहरुले नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड युग समेत भनेका थिए । तर, २०७४ को फागुन ७ गते उनै प्रचण्ड एमालेमा विलय भए । २०५२ फागुन १ गतेदेखि सुरु भएको ‘प्रचण्ड युग’ २०७४ को फागुनमा अन्त्य भयो ।
‘राज्यसत्ता बाहेक सबै भ्रम’ भन्दै गरेको जनयुद्धका उद्देश्यमा नपुग्दै प्रचण्डले माओवादी आन्दोनललाई आफैले गाली गरेको एमालेमा विलय गराए । त्यसैले फागुन ७ गते मध्यरातबाट ‘प्रचण्ड युग’ को अवशान भएको छ । अब प्रचण्डको अाफैले सुरु गरेको राजनीतिक पहिचान रहेन । पार्टी एकताको लागि हस्तक्षार भएका सात बुँदेमा पनि प्रचण्ड निकै चिप्लिएका छन् । चार नम्बर बुँदा एमालेले जानेरै जबज उल्लेख गर्‍यो तर जनयुद्ध, माओवाद र २१ औं शताब्दीको जनवाद कुनै पनि उल्लेख छैन ।
जनयुद्ध सुरु गर्दा प्रचण्डले यस्तो प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए
३. हाम्रो योजना सामन्तवाद र साम्राज्यवादलाई ध्वस्त गरी नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा गर्ने त्यसको लगत्तै समाजवादी क्रान्तिमा अघि बढ्ने तथा सर्वहाराको अधिनायकत्वअन्तर्गत क्रान्ति जारी राख्ने सिद्धान्तका आधारमा साँस्कृतिक क्रान्तिहरू चलाउँदै मानव जातिकै स्वर्णिम भविष्य साम्यवादको स्थापनासम्म जाने उद्देश्यमा आधारित हुनेछ । एकपटक हतियार उठाएपछि त्यसलाई अन्तसम्म लैजाने दृढताविना सशस्त्र सङ्घर्षको थालनी गर्नु सर्वहारावर्ग एवम् आम जनताप्रति अपराध हुने कुरामा हामी दृढ छौं । यो सङ्घर्ष जनताको स्थितिमा आंशिक सुधार गर्ने, प्रतिक्रियावादीलाई दवाब दिई सामान्य सम्झैतामा टुंग्याउने साधन बन्न कदापि दिइने छैन । यसरी हाम्रो सशस्त्र सङ्घर्ष सबै प्रकारका निम्नपँुजीवादी, संकीर्ण राष्ट्रवादी, धार्मिक, साम्प्रदायिक एवम् जातिवादी विभ्रमहरूबाट सम्पूर्ण रूपले मुक्त रहने छ ।
५. हाम्रो योजना नयाँ जनवादी क्रान्तिकालमा सर्वहारावर्गको पार्टीको नेतृत्वमा क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा र क्रान्तिकारी सेना निर्माणको सैद्धान्तिक मान्यतामा आधारित रहनेछ । अन्तरविरोधको नियमको सार्वभौमिकताअनुसार भित्री–पार्टी–सङ्घर्षलाई द्वन्द्वात्मक ढङ्गले ग्रहण र त्यसलाई सञ्चालन गर्नु, पार्टीलाई त्यसरी सजीव राखी हर क्षेत्रमा त्यसको नेतृत्व स्थापित गर्नु, पूरा हृदयले जनताको सेवा गर्ने, जनतासँग घनिष्ट सम्बन्ध कायम राख्ने जनदिशाको सिद्धान्तमा अविचल रहने कुरामा पार्टी कटिबद्ध छ ।
बाजुराका दुई पुलमा बम, यातायात ठप्प